डिबेट्स टू टूस्टर्स, लिङ्ग समाचार घटनाहरु को सबै प्रकार को आवरण को लागि युक्तिहरु
त्यहाँ एक पत्रकारिता रस को बहने को लागि एक लाइव, ब्रेक न्यूज घटना को कवर जस्तै केहि छैन। तर प्रत्यक्ष घटनाहरू अक्सर अराजकता र अव्यवस्थित हुन सक्छन्, र यो रिपोर्टर माथि अराजकता गर्न आदेश ल्याउन सक्छ। यहाँ तपाइँ लाइभ समाचार घटनाहरू, भाषणबाट सबै चीजहरू र दुर्घटनाहरू र प्राकृतिक आपदाहरूलाई प्रसोधन गर्न कसरी लेख्न पाउनुहुनेछ।
मानिसहरू बोल्दै - भाषण, व्याख्यान र फोरम
क्रिस्टोफर Hitchens। Getty Images
आवरण भाषणहरू , व्याख्यानहरू र फोरमहरू - कुनै पनि लाइभ घटना हो जसले मूलतः मानिसहरूसँग कुरा गर्दछ - पहिलोमा सजिलो लाग्न सक्छ। सबै पछि, तपाईं त्यहाँ त्यहाँ खडा छ र व्यक्तिले भन्नुहुन्छ, ठीक छ? वास्तवमा, आवरण भाषणहरू शुरुवात गर्न कठिन हुन सक्छ। सुरू गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका, जहाँ सम्म रिपोर्टिंग को रूप मा तपाईं भाषण भन्दा पहिले नै अधिक जानकारी प्राप्त गर्न को लागी छ। तपाइँ यस लेखमा थप सुझावहरू पाउनुहुनेछ। बढि »
पोडियममा - प्रेस सम्मेलनमा
ATLANTA - रोग नियंत्रण र रोकथाम निवारण केन्द्रका लागि टिम फ्रिडेन ईबोला प्रकोपमा एक प्रेस कन्फिगरेसन हो।
समाचार व्यवसायमा पाँच मिनेट खर्च गर्नुहोस् र तपाईंलाई एक प्रेस कन्फिगरेसन कवर गर्न सोधिने छ। तिनीहरू कुनै पनि रिपोर्टरको जीवनमा नियमित घटना हो, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई कवर गर्न सक्षम हुनुपर्दछ - र तिनीहरूलाई राम्ररी लुकाउनुहोस्। तर शुरुवातको लागी, एक प्रेस कन्फिगरेसन कभर गर्न गाह्रो हुन सक्छ। कन्फिगरेसनहरू प्रेस चाँडै सार्न उत्प्रेरित हुन्छन् र प्रायः धेरै लामो हुदैन, त्यसैले तपाइँसँग आवश्यक जानकारी पाउनको लागि तपाईंसँग धेरै समय लाग्न सक्छ। तपाईं धेरै राम्रो प्रश्नहरूको साथ सशस्त्र आएर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। बढि »
जब चीज गलत हुन्छ - दुर्घटनाहरू र आपत्तिहरू
RIKUZENTAKATA, जापान - पारिवारिक फोटो 2011 सुनामीबाट टाढा टाढा निकासी केन्द्रमा प्रदर्शन गरियो। Getty Images
दुर्घटनाहरू र आपदाहरू - भूकम्प, टोरडोडो र सुनामीसहरू विमानस्थल र रेल दुर्घटनाबाट सबै चीजहरू - केही कठिन कथाहरू समावेश गर्नका लागि हुन्। दृश्यमा रिपोर्टरहरू निकै गाह्रो परिस्थितिमा महत्त्वपूर्ण सूचना इकट्ठा हुनुपर्छ, र धेरै त्रयी म्यादहरूमा कथाहरू उत्पादन गर्न अनिवार्य छ। एउटा दुर्घटना वा आपदालाई समातेर सबैलाई रिपोर्टरको प्रशिक्षण र अनुभव चाहिन्छ। सम्झनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा? तपाईंको शांत राख्नुहोस्। बढि »
दैनिक समाचार - बैठकहरू
त्यसोभए तपाइँ एक बैठकको आवरण गर्दै हुनुहुन्छ - सम्भवतः एक नगर परिषद वा स्कूल बोर्ड सुन्ने - पहिलो पटक एक समाचार कथाको रूपमा, र जहाँ रिपोर्टिङ सम्बन्धित छ जहाँसम्म सुरू गर्न निश्चित छैन। बैठक अगाडिको एजेन्डाको प्रति प्राप्त गरेर सुरू गर्नुहोस्। त्यसपछि बैठक अघि पनि केही रिपोर्टिङ गर्नुहोस्। मुद्दाहरूको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस् कि नगर परिषद वा विद्यालय बोर्ड सदस्यहरू छलफल गर्ने योजना छ। त्यसपछि बैठक सुन्नुहोस् - र ढिलो हुनुहोस्! बढि »
उम्मेदवारहरू चेहरा बन्द - राजनीतिक बहसहरू
न्यू जर्सी गोभ क्रिस क्रिस्टी एक जीओपी छलफलको समयमा एक बिन्दु बनाउँछ। Getty Images
उत्कृष्ट टिप्पणीहरू लिनुहोस् । स्पष्ट बिन्दु जस्तो आवाज, तर बहसहरू लामो (र प्रायः लामो समयसम्म) छन्, त्यसैले तपाईं मेमोरीमा चीजहरू गर्न सक्नु भएकोले केहि चीजहरू हराउन जोखिम नहटाउन चाहानुहुन्छ। सबकुछ पेपरमा पाउनुहोस्। समयको अगाडी धेरै पृष्ठभूमि प्रतिलिपि लेख्नुहोस्। किन? बहस अक्सर रात मा आयोजित गरिन्छ, जसको मतलब धेरै तंग डेडलाइनहरुमा कथाहरू लेख्नु पर्छ। र छलफल नगर्ने सम्म नबिर्सनुहोस् जब सम्म तपाईले जानुहुन्छ कथा बोल्नु पर्छ।
सहयोगीहरू राजनैतिक राजनैतिक दलहरू
हिलारी क्लिंटन अभियानको यात्रामा। Getty Images
तपाईले रैलीमा टाउको गर्नु अघि, उम्मेद्वारको बारेमा जित्न सक्नु हुन्छ। त्यो कहाँ (वा त्यो) समस्याहरूमा खडा छ, र उनीहरूलाई सामान्यतया स्टम्पमा के भन्नुको लागि एक महसुस गर्नुहोस्। र भीडको साथ रहनुहोस्। राजनैतिक रैलियहरुमा सामान्यतया प्रेसको लागि सेट गरिएको एक विशेष खण्ड छ, तर तपाईले सुन्नु भएको एउटा मात्र चीज छ जो पत्रकारहरु को एक गुच्छा छ। भीडमा जानुहोस् र उम्मेद्वार हेर्न बाहिर आएका स्थानीयहरू साक्षात्कार गर्नुहोस्। तिनीहरूको उद्धरण - र उम्मेद्वारको उनको प्रतिक्रिया - तपाईंको कथाको ठूलो भाग हुनेछ। बढि »
यहाँ धेरै कुरा तपाईं महान समीक्षा लेखन को बारे मा जान्न आवश्यक छ
बच्चाहरूसँग बेल्टेन मनाउँछन्
रासायनिक मिलानको इतिहास
Accusative र Dative को लागि जर्मन सजावट संरचना सिक्नुहोस्
कला शब्द खोज पहेलियाँ
Suchomimus तथ्य र चित्र
12 consecuencias को द्वारा pagar pensión alimenticia (बाल समर्थन)
तपाईंको आवश्यक Rappelling उपकरण
10 स्थानहरु LSAT नमूना प्रश्नहरु अनलाइन खोज गर्न
निस्तारका लागि कोषर के खानेहरू छन्?
यो गलत मौसम को कारण मिस मास को पाप छ?
सेलिबिया को बुझन
12 नि: शुल्क यहूदी वंशावली डेटाबेस अनलाइन
शम्बले गोल्फ टूर्नामेंट कसरी खेल्ने
अनुवादका सिद्धान्तहरू: तपाईं कस्तो वचन प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ?
मर्मोन्स पायनियर डे
मजा युवा समूह खेलहरू
शीर्ष किताबहरु को लागि सिकन पोकर टूर्नामेंट रणनीति
10 चीटहरु को बारे मा आकर्षक तथ्य
तपाईंको शैली शैली सिकाउने सबैभन्दा धेरै बनाउनुहोस्